Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » LGBTQ » 2021 Sharafyada Shirweynaha Caalamiga ah ee 37aad ee IGLTA ayaa lagu dhawaaqay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • LGBTQ • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Horyaalka dalxiiska LGBTQ+ Matt Skallerud, oo caan ku ah safarka LGBTQ+ safarka Annette Kishon-Pines iyo Atlanta Black Pride Weekend ayaa la sharfi doonaa inta lagu gudajiro Shirweynaha Caalamiga ah ee 37aad ee IGLTA.
Horyaalka dheer ee LGBTQ+ dalxiiska Matt Skallerud wuxuu heli doonaa Hanns Ebensten Hall of Fame Award.
Halyeeyga dalxiiska iyo isbahaysiga LGBTQ+, Annette Kishon-Pines waxay heli doontaa abaalmarinta ugu horreysa ee Ally Award ee IGLTA.
Isbuuca dhammaadka ah ee Atlanta Black Pride wuxuu heli doonaa Abaalmarinta Pathfinder ee IGLTA 2021.
IGLTA's 37th Annual Global Convention wuxuu dhacayaa 8-11 Sebtember, sanadkaan wuxuu ka dhacayaa markii ugu horeysay Atlanta, Georgia
Saddex tiir oo ah dalxiiska LGBTQ, suuqgeynta iyo awood-siinta-Pink Media Matt Skallerud, Belmond's Annette Kishon-Pines iyo Atlanta Black Pride Weekend-ayaa heli doona sanadkan IGLTA Maamuusyada. Waxaa soo xulay guddiga agaasimayaasha ururka, abaalmarintan waxaa la siiyaa shaqsiyaad ama meherado ay ka go'an tahay hagaajinta muuqaalka guud ee caalamka LGBTQ+ socotada. Maamuusyada IGLTA waxaa lagu soo bandhigi doonaa taageerada deeqsinimada leh ee Booqashada Philadelphia ee IGLTA Shirweynihii 37aad ee Caalamiga ah, loo dhigay Hotel Midtown, Atlanta, 8-11 September.
Horyaalka muddada dheer ee dalxiiska LGBTQ+ Matt Skallerud wuxuu heli doonaa Hanns Ebensten Hall of Fame Award, oo laga magacaabay ninka sida weyn loogu tixgeliyo aabbaha safarka khaniisiinta, oo sharaftiisa magaciisa la siiyo sannad walba xubin gaar ah oo ka tirsan IGLTA. Skallerud, oo ah madaxweynaha Warbaahinta Pink Media, ayaa si weyn loo yaqaan oo lagu xushmeeyaa shaqadiisa hagar la’aanta ah ee warshadaha safarka iyo suuqgeynta labadaba, waana mid ka mid ah khabiirada ugu horreeya adduunka ee suuqgeynta dalxiiska LGBTQ+. In ka badan 20 sano, Skallerud wuxuu ka caawiyay shirkadaha cabbirkoodu kala duwan yahay inay gaaraan macaamiisha internetka LGBTQ+ waxayna hadda diiradda saarayaan hal-abuurnimada caalamiga ah ee ugu wanaagsan xagga iibsiga xayeysiiska barnaamijka, isku-xirka bulshada iyo teknoolojiyadda Webka 2.0. Guddoomiyihii hore ee guddiga IGLTA, waa xoog lagu yaqaan Shirarka Caalamiga ah ee Sannadlaha ah ee kooxda, isagoo u qabtay bandhigyo badan oo suuqgeynta warbaahinta bulshada ah oo loogu talagalay ka -qaybgalayaasha. Wuxuu kaloo abuuray dhacdadii ugu horreysay ee xiriirinta warbaahinta dhexdeeda shir IGLTA ee 2008 Las Vegas.
Halyeeyga dalxiiska iyo isbahaysiga LGBTQ+, Annette Kishon-Pines waxay heli doontaa abaalmarinta ugu horreysa ee Ally Award ee IGLTA. Maamuuskan waxaa la siiyaa shaqsi, meherad ama hay'ad, in kasta oo aysan ahayn LGBTQ+, ay muujisay ballanqaad muddo dheer ah oo ku aaddan u-hagidda socdaalka loo dhan yahay, oo gacan ka geysaneysa hagaajinta khibradaha socdaalka LGBTQ+ adduunka oo dhan. Kishon-Pines waxay ku dhawaad ​​afartan sano ku sugnayd kooxda caanka ah ee Belmond safarka safarka, iyagoo u ahaa maareeyaha hawlgalkeeda ka dibna agaasimeheeda iibka caalamiga ah ee Ameerika. Sannadkii 2015 waxay u magacawday Belmond agaasimihii ugu horreeyay ee u heellan iibinta LGBTQ, sannad kadibna wuxuu kormeeray abuurista Guddiga La -talinta LGBTQ, oo ah kii ugu horreeyay noociisa ee warshadaha. Sannadihii ay Belmond ku jirtay oo dhan, Kishon-Pines waxay siisay taageero aan la tirin karin LGBTQ+ safarka qabanqaabiyeyaasha, ururada xuquuqda aadanaha iyo hay'adaha samafalka, oo u adeega sidii ilayska isbahaysiga ee ka jira warshadaha dalxiiska adduunka.
Toddobaadka Toddobaadka Madowga Madoow ee Atlanta - oo ah mid ka mid ah dabbaaldegyada ugu weyn ee Madowga Adduunka - wuxuu heli doonaa Abaalmarinta Pathfinder ee IGLTA ee 2021, oo loo soo bandhigo shaqsi, ganacsi, ama urur saamayn togan ku leh meeshii ay u socdeen, iyo muujinta heerka ugu sarreeya ee diirranaanta iyo soo dhoweynta Bulshada LGBTQ+. Jawiga taajka ah ee munaasabaddu waa Bandhigga Beesha ee Daaqsinka ah ee aan macaash doonka ahayn, kaas oo bixiya xaflad oggolaansho-bannaan oo bannaanka ah oo ay ka buuxaan muusik, madadaalo, cunto iyo madadaalo, oo ujeeddadeedu tahay kobcinta isgaarsiinta, bixinta tusaalayaal wanaagsan, awood siinta dadka oo dhan, iyo ka soo horjeedda eexda LGBTQ+ iyo bulshooyinka is bahaystay. IGLTA waxay taageeraysaa Bandhigga Beesha kulaylaha ee daahirka ah sannadkan, iyadoo lala kaashanayo shirweynihiisa.
IGLTA's 37th Annual Global Convention wuxuu dhacayaa 8-11 Sebtember, sannadkan wuxuu ka dhacayaa markii ugu horreysay Atlanta, Georgia.